Maitiro ekusetazve kana kutangazve iyo nyowani iPhone X / Xr / Xs mumatanho matatu akapusa | IPhone nhau
Maitiro ekusetazve kana kutangazve iyo nyowani iPhone X mumatanho matatu ari nyore
Kuuya kweiyo nyowani iPhone X ndeye shanduko nyowani munzira yekuita yakaoma reset kana kudzoreredza chishandiso kana ikazobatwa "chero chikonzero. Uye ndeyekuti mune emhando dze iPhone pamberi peiyo iPhone 7 uye 7 Plus, nzira yekutangazve michina yaive nekutsikirira bhatani repamba uye bhatani remagetsi panguva imwe chete. Nekuuya kweiyo nyowani iPhone 7 uye nekutsakatika kweiyo bhatani bhatani, Apple yakachinja nzira yekumisazve kana kutangazve iyo iPhone, ino nguva yaive nguva yekudzvanya bhatani remagetsi uye vhoriyamu pasi bhatani panguva imwe chete.
For the modhi nyowani iyo inovhura muzvitoro zvayo nhasi Apple, isu tinoshandura maitiro zvakare uye panguva ino tisina kana mabhatani pane iyo nyowani iPhone X izvo zvatinofanirwa kuita matanho matatu akareruka atichatsanangura mushure mekusvetuka.
1 Maitiro ekuitazve kana kuseta patsva iPhone X / Xr / Xs
2 Maitiro ekudzima iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xr, kana iPhone Xs Max
3 Maitiro ekutanga zvakare iPad Pro neFace ID
4 Maitiro ekudzima iPad Pro neFace ID
5 Ndakavhara kana kudzoreredza chishandiso
6 Nei yangu iPhone yakarembera
Maitiro ekuitazve kana kuseta patsva iPhone X / Xr / Xs
Kana iyo skrini yeiyo iPhone, iPad kana iPod touch inoenda nhema kana chishandiso hachidi Kune chero mabhatani kana kudyidzana kwatinoita pachiratidziri, tinofanirwa kumanikidza kutanga kwechigadzirwa chedu.
Maitiro ekutanga kana kuseta patsva iyo iPhone X kana iri iyo usapindure neimwe nzira:
Tinodzvanya iyo vhoriyamu kumusoro bhatani uye isu tinosunungura
Tinodzvanya iyo vhoriyamu pasi bhatani uye isu tinosunungura
Isu tinoramba takatsimbirira padivi bhatani «On / Off» kusvikira logo yeapuro yaonekwa
Muchiitiko chekuti iko kutangazve kwakazara kwechigadzirwa hakugadzirise dambudziko, chatinofanirwa kuita kuwana kana kuyedza kuwana iwo marongero e iPhone. Isu tinogadzira backup mu iTunes, iCloud kana chero kwatinoda uye tinoenda kuZvirongwa -> Zvirongwa -> General -> Kutangazve. Izvi zvinofanirwa kutangazve iyo iPhone X uye kugadzirisa dambudziko, mune chero mamiriro ezvinhu isu tinogara tichifanira kugadzira backup makopi kuitira kana dambudziko remhando iyi rikamuka iro isu tinofanirwa kudzoreredza iyo iPhone.
Maitiro ekudzima iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xr, kana iPhone Xs Max
Kusvikira kuvhurwa kweiyo iPhone X, bhatani repamba / yekurara re iPhone rakatibvumidzawo kudzima chishandiso kana tikachibata pasi kwemasekonzi mashoma. Nekudaro, nekuvhurwa kweiyo iPhone X zvese zvakachinja. Kana tichida kudzima yedu iPhone X, uye gare gare mamodheru isu tinofanirwa pamwe chete pinda padivi repamba / yekurara bhatani pamwe nechero vhoriyamu mabhatani.
Panguva iyoyo, chidzitiro che iPhone yedu chinoratidza mutserendende uyo unotikoka kutsvedza munwe uchitevera nzira yayo kuenda dzima chishandiso.
Iyi haisi iyo chete nzira yatinofanira kudzima nayo iPhone X, nekuti kuburikidza neMamenyu eSystem, isu zvakare tine sarudzo yekudzima yedu iPhone, zvisinei nemuenzaniso. Nokuda kweizvi tinofanira kuenda Zvirongwa> Zvekare> Simba rinodzimwa. Iyi sarudzo inowanikwawo paIpad, zvisinei nemuenzaniso.
Maitiro ekutanga zvakare iPad Pro neFace ID
Iyo iPad Pro 2018 renji yaive yekutanga kurova pamusika pasina bhatani repamba iro raive rakaperekedza ichi chishandiso kubva kune yayo yekutanga modhi. Kuti ugone kupa yakakura saizi saizi muhukuru hwakaenzana, Apple yakafunga kuwedzera Face ID tekinoroji kune iyo iPad Pro renji muna 2018, saka bhatani rekutanga rinonyangarika uye hatigone kutangidza chishandiso sezvatakaita kusvika ipapo.
Maitiro ekuti utangezve iyo Pro Pro neFace ID uye gare gare mamodheru ari nyore kwazvo uye hazvizotitorere nguva, isu tinongofanirwa tevera matanho ari pazasi:
Dhinda uye nekukurumidza kusunungura vhoriyamu kumusoro bhatani.
Dhinda uye nekukurumidza kusunungura vhoriyamu pasi bhatani.
Dhinda uye bata bata Kumba / Kurara bhatani kudzamara mudziyo watangazve.
Maitiro ekudzima iPad Pro neFace ID
Maitiro ekudzima iPad Pro neFace ID Izvo zvakafanana zvatinoita kudzima iyo iPhone X uye gare gare mamodheru. Isu tinongofanirwa kubaya yekutanga / yekurara bhatani uye tisina kuburitsa bhatani chero eiri mavhoriyumu mabhatani kusvikira inotsvedza yaonekwa pachiratidziro inotikoka kudzima chishandiso.
Ndakavhara kana kudzoreredza chishandiso
Kunge komputa, kutangazve hakuna kufanana nekuvhara. Kana isu tikaramba tichidzima yedu iPhone, iyo inoshanda sisitimu inozove nebasa rekuvhara ese akavhurika maitiro kuti aenderere kune yakachengeteka kudzima kweanoshanda system uye kuti haina kuratidza mashandiro ekushanda patinoitangazve. Dzidziso imwecheteyo inoshanda kumakomputa.
Kune rimwe divi, kana tikatangazve chishandiso, mashandiro ehurongwa hwekushandisa akatsemurwa zvachose, pasina kupa nguva yekuti mashandiro nemasevhisi avhare nenzira kwayo pachigadzirwa chedu. Sezvakaitika mune yapfuura kesi, iyi dzidziso inoshandawo kumakomputa. Dambudziko rekutanga komputa yedu nderekuti kwete chete isu tinogona kurasikirwa nedhata mune izvi maitiro, sezvo chikamu chehurongwa hwekushandisa chichigona kushatiswa, asi zvakare maitiro aya anotora nguva yakareba kuti mudziyo ushande zvakare.
When isu tinomanikidzwa kutangazve yedu iPhone, nekuti haina kupindura chero basa, kana iyo inotibvumira kudzima system, isu hatizotambura chero njodzi yekurasikirwa kwedata kana kuti idzi dziine mukana wekushatiswa, nekuti hurongwa hwakamiswa zvachose uye kusaita chiito.
Nei yangu iPhone yakarembera
Chikonzero chikuru nei iPhone yedu ichigona kuratidza matambudziko ekushandisa, tinoiwana ese ari maviri muhurongwa hwekushandisa uye mune mamwe mapurogiramu. Apple inogadzira yega yega vhezheni nyowani yeIOS yenhamba yakati wandei yemidziyo, saka inoenderana kune yega uye yega, kuitira kuti mashandiro e iPhone yedu anofanirwa kuve akanakisa.
Neshanduro yega yega yeIOS, vagadziri vanofanirwa gadziridza maapplication ako kuvaita 100% inoenderana neshanduro nyowani yeIOS. Neraki kune vashandisi, vazhinji vanogadzira vanokurumidza kugadzirisa kwavo kunyorera kuti kuve kunoenderana uye vasina nyaya dzekuita. Kana vakatora nguva yakareba kupfuura zvakafanira, Apple inovabata kuti vakurumidze maitiro ekuvandudza kana vasingade kuonana kunze kweApp Store.
Kubva 2017, Apple yaita kuti iwanikwe kune vese vashandisi a iOS yeruzhinji beta chirongwa, saka chero mushandisi anoda kuyedza nhau dzeiyo inotevera vhezheni yeIOS anogona kuzviita asina kuve anovandudza. Semutemo wakajairika, Apple inowanzo kuburitsa akati wandei mabetas einotevera vhezheni yeIOS yevagadziri chete kutanga, vasati vaburitsa beta yeruzhinji.
Icho chikonzero hachisi chimwe kunze kweku kugadzikana kwesisitimu. Iko kudzikama kwesystem iri yechipiri kune vanogadzira, nekuti chinangwa chayo ndechekuti vatange kugadzirisa maapplication avo kune iyo nyowani vhezheni yeIOS uye zvinonzwisisika kuwedzera kuenderana nemabasa matsva akaitwa naApple.
Kugadzikana kwechigadzirwa chedu chinotungamirirwa neIOS beta hakusi icho chakanyanya kukwana kana tikashandisa iPhone yedu zuva nezuva sechigadzirwa chikuru, sezvo ichigona kutangwazve nguva nenguva uye pasina chikonzero chiri pachena, mafomu anogona kuvharwa kana kusatombovhurwa chero nguva kuwedzera mukutora nguva yakareba kuvhura ... Iyo beta uye senge chero beta yeiyo inoshanda sisitimu, Iri pasi pekuvandudzwa kusvikira iyo vhezheni yekupedzisira yaburitswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekusetazve kana kutangazve iyo nyowani iPhone X mumatanho matatu ari nyore
Akanakisa mupiro shamwari iwe wakandinunura kubva pa
David Leonardo Gomez Pulido akadaro
Nemamiriro ezvinhu aya e COVID19, nekuchenjerera kwakakodzera geza nemvura (usanyudza kana kuisa pasi pepombi), uchingova nechanza cheruoko nyatsoisa mvura yesipo. Nharembozha inovhura (pairi dhamu remaapuro, uye mumashure memasekonzi gumi kusvika gumi nemashanu, chidzitiro chinopenya uye kudzima, dhamu reapuro rinowoneka zvakare uye kutenderera kunopfuurira.mira pamberi pekamuri hita, kumirira mvura inogona kunge iine akaipinza kuti ive mhute, uye ndinovimba ndinogona kudzosa yangu iPhone.
Mhedziso, iyo iPhone X chishandiso chakasimba kwazvo chemvura, hachisi chokwadi kuti iyo X X haina mvura.
Pindura kuna David Leonardo Gómez Pulido
Apple ichave nenguva yekupindura iyo Spotify kesi muEU
ICloud masevhisi akabatwawo nekudonha kweGoogle Cloud